Via-mu-ikanyanya - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Nokuwedzera zvinoitwa miniaturization zvigadzirwa zvinhu uye kushanda kunoita kwazvo namo mano, vias wazova chaizvo sezvo vari anobudirira mhinduro anokonzera zvemagetsi kubatana pakati tichingoda akasiyana akaturikidzana vari rakadhindwa redunhu bhodhi. Vias inogona Classified kupinda mhando nhatu huru: Kuburikidza-buri Vias, Mapofu Vias uye Kuvigwa Vias, chimwe nechimwe zvokurimisa yakasiyana hunhu uye mashandiro kusakisa zvinonakisa Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri chokupika PCBs kana kunyange zvemagetsi zvinhu.
Via-mu-ikanyanya (VIP) zvigadzirwa Rinoreva unyanzvi nawo Via anoiswa zvakananga pasi chinoumba kuonana ikanyanya, kunyanya BGA ikanyanya pamwe kwazvo nenamo kuko package. Nemamwe mashoko, VIP zvemichina kunotungamirira vias kuifukidza kana chakavigwa pasi BGA ikanyanya, vachikumbira kuti pcb mugadziri vanofanira chivhariso Via chete nebwe asati kuita mhangura yakanamirwa pamifananidzo iri Via kuti asingaoneki.
Tichienzanisa mapofu vias uye akavigwa vias, VIP zvemichina inoratidza zvakawanda dhigirii:
• Rakakodzera wakanaka nenamo BGAs
• Mukusarudza yakakwirira arambe achirema pamusoro PCBs uye kukurudzira nzvimbo kuponesa
• Kuita nani mune chafariz utariri, runobatsira kupisa nounzenza
• akundwe constraints mukuru-nokukurumidza mazano akadai yakaderera inductance
• Kutaurirana sandara penyika ine chikamu kuda
• Kuita pcb pakatsikwa netsoka zviduku uye hwokutiparadza mberi uye nani
Nokuda avo zvakanakira VIP michina, vachishandisa mu ikanyanya zvinowanzodavirwa kushandiswa madiki PCBs, kunyanya avo kuti zvinoda zvishoma nzvimbo BGAs uye kuisa pfungwa nekupisa tama uye mukuru-nokukurumidza mazano. Saka, kunyange zvazvo mapofu / akavigwa vias zvinobatsira kuti arambe achirema kuvandudza uye pcb Real Estate okuponesa, kusvikira kupisa zvakanaka uye mukuru-nokukurumidza magadzirirwo zvinhu nezvevayaruka, vachishandisa mu ikanyanya ichiri chakanakisisa sarudzo kwamuri. With mutengo ndakatendeka, zvakasiyana zvirongwa kutungamirira zvakasiyana mutengo. Saka kana vias vanobatanidzwa mubasa rako uye ukatadza tonotora izvo mhando, nesu kuburikidza neindaneti wonderful@wonderfulpcb.com uye mudonzvo redu achakupa imwe Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri mhinduro.